जय भोले छक्का पन्जा ३ सँग नजुध्दा फाइदा कि घाटा ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsKollywoodजय भोले छक्का पन्जा ३ सँग नजुध्दा फाइदा कि घाटा ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्माले बनाएको जय भोले सिनेमा हलमा चलिरहेको छ । मल्टिप्लेक्समा यो सिनेमाको व्यापार राम्रो छ ।
निर्माता समेत रहेका शर्माले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जय भोले हिट भएको दाबी गरेका छन् । दशैंको फूलपातिबाट रिलिज भएको फिल्मले एक हप्तामा ३ करोड २ लाख ग्रस कलेक्शन गरेको अशोक शर्माले बताएका छन् ।
उनले सिनेमाले एक सातामा लगानी उठाएको र दोश्रो हप्तादेखिको कमाई सबै आफ्नो फाइदामा हुने बताएका छन् ।
अशोक शर्मालाई छक्का पन्जा ३ सँग फिल्म नजुधाएको पछुतो लागेको छ । किनकी, उनलाई लाग्छ छक्का पन्जा ३ सँगै नै फिल्म जुधेको भए, अझ बढी कमाई जय भोलेले गर्ने थियो ।
अशोकलाई यसपटक फिल्मको प्रचारमा आफूलाई कलाकारले साथ दिएको भन्ने लाग्छ । सिनेमाको प्रचारमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का ज्वरो आइन्जेल हिडेको उनले बताए । अहिले सम्पर्कमा नआउँदा आफूले निश्चललाई फोन गरेर सोधेको अशोकले जानकारी दिएका छन् ।
यो सिनेमाले समिक्षकको समिक्षा औषत पाएको छ । फिल्म सफल भएपनि १२ बर्षपछि निर्देशनमा फर्किएका अशोकको निर्देशकिय क्षमताले जादु चलाउन भने सकेन । अशोकले नयाँ फिल्म रातो टिका निधारमा निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।
depak raj giri
jay bhole boxoffice report
weekly filmy collection